Hongrie: Tatitra an-tsary sy video avy amin’ireo mpitoraka blaogy momba ny tondra-drano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Jona 2010 4:44 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Nederlands, Deutsch, Français, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Español, English
Tsy mbola tapitra akory ny tondra-drano namely ny faritra Afovoany sy Atsinanan'i Eraopa tamin'iny herinandro lasa iny. MTI, masoivohom-baovao iray avy any Hongrie, dia nitatitra fa hatramin'ny 15 May fa noraisina ny fepetra vonjimaika ho fiarovana amin'ny tondra-drano ami'ny sisin-drenirano mirefy 930 km, nampiasana gonim-pasika 3.6 tapitrisa ary nanaingana ny Fiarovana sivily avy amin'ny UE hanao misimisy kokoa. Nahazo gonim-pasika 2.12 tapitrisa i Hongrie avy amin'i Aostalira, Kroasia, Repoblika Tseky, Alemana ary ny Holandey.
Naka sary nanodidina ny tranon'izy ireo tratr'ity loza voajanahary ity ireo mpitoraka blaogy. Iray tamin'izy ireny i Basesoft avy ao Szikszó, tanana iray any avaratr'i Hongrie. Nametraka fanamarihana iray (HUN) izy ao amin'ny blaoginy (HUN) fa hoe tsy meneho ny tena haratsin'ny zavamisy akory ireo sary noh izy ireo tsy afaka intsony nanana fotoana nakana sary hatreto.
Sary nahazoana alalana tamin'i Basesoft
Zsolt Szentirmai nandefa andian-tsary momba ny tondra-drano tao Sátoraljaújhely, mbola any avaratr'i Hongrie ihany, akaikin'ny sisintany Slaovaky.
HL avy ao Heréd (HUN) dia in-telo nandefa (HUN, eto, eto ary eto), nanampy sary momba ny tondra-drano sy ny asa fiarovana amin'ny tondra-drano.
Ity singa iray ity dia maneho ihany koa sary sy video, mitatitra amin'ny ampahany voalohany fa tany amin'ny faritra antsoina hoe Transdanubia sy ny tendrombohitra ao avaratry ny firenena dia 20 hatramin'ny 60 mm ny rotsak'orana, ary tamin'ny faitra sasany aza dia nahatratra 86 mm. Ilay video fohifohy dia mampiseho ireo faritra manerana ny firenena izay tena voa mafy tamin'ilay tondra-drano. Bantabas, izay namokatra ilay video, dia nanampy tao amin'ny famariparitana sy tamin'ireo sary sasantsasany fa hoe ireo rehetra izay mahita ilay video dia tokony mba hitondra fanampiana araka izay vitan'izy ireo.